मातेकी श्रीमतीलाई नाङ्गै बनाएर टीभी लाइभ ! | DON Nepal मातेकी श्रीमतीलाई नाङ्गै बनाएर टीभी लाइभ ! – DON Nepal
Home रोचक मातेकी श्रीमतीलाई नाङ्गै बनाएर टीभी लाइभ !
By Don NepalMay 18, 2018, 17:10 pm0
श्रीमतीसँगको समागमका दृष्य खिचेर फिल्म बनाउने श्रीमानका हर्कत अब कुनै नयाँ रहेनन् । प्रबिधिको बिकाश जति तिब्र बन्दै छ यसको दुरुपयोग पनि त्यस्तै ढंगले भइरहेको छ ।
हालै एक बेलायती पुरुषले रक्सीले मातेकी श्रीमतीलाई नाङ्गै बनाएर टेलिभिजनमा लाइभ देखाएका छन् । सोनीको प्ले स्टेशन–४ को सहयोगमा आफ्नो पत्नीको नंगो तस्वीर प्रशारण गरेका हुन् ।
मदिराको नशामा लट्ठ आफ्नो पत्नीलाई नग्न अवस्थाको भिडियो लाइभ स्ट्रीमिङको माध्यमबाट प्रशारित गरेका हुन् । नारकोरबा नाम गरेका व्यक्तिले आफ्नो लिभिङ रुममा बसेर श्रीमतीसँग मदिरा पिएका थिए । पत्नी नशाले मात्तिएपछि उनले यस्तो घिनलाग्दो हर्कत गरेका हुन् । डारकोरबाले पहिलो आफ्नो पत्नीको माथिल्लो भागको कपडा फुकाले । त्यसपछि एक एक गर्दै पत्नीलाई नग्न बनाए ।
लिभिङ रुमको यो दृश्य लगातार प्रसारित भएको थियो । पत्नीको शरीरमा एक टुक्रा पनि कपडा नभएपछि उनी कोठाबाट बाहिर गएका थिए । करीब १५४ मिनेटपछि स्क्रीन ब्लक भएको थियो । तर, फीड फेरि आयो, त्यसबेला पनि ती महिला निर्वस्त्र थियो ।
पछिल्लो साता लन्च भएको सोनी प्ले स्टेशन–४ मा लाइभ स्ट्रीमिङको नयाँ फिचर जोडिएको थियो । यसको सहयोगले प्रयोगकर्ताले बिभिन्न भिडियो ट्वीच टीभीमार्फत् लाइभ प्रशारण गर्न सक्छन् । यी पुरुषले भने आफ्नी श्रीमती नाङ्गो शरिर दुनियाँलाई दर्शन गराएका छन् ।
Previous Postभगवानले छोरी उसलाई दिन्छ जसले छोरी पाल्न सक्ने हिम्मत राख्छ - सहमत हुनुहुन्छ भने शेयर गर्नुहोस Next Postगोरो बन्न किन लगाउनु पर्यो महँगो महँगो क्रिम ? घरमै बसी बसी चामलको पानीले ७ दिनमै बन्नुस नसोचेको गोरो - भिडियोसहित